कमला ह्यारिस अमेरिकामा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने, को हुन ह्यारिस ? « Pen Nepal
कमला ह्यारिस अमेरिकामा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने, को हुन ह्यारिस ?
Published On : 12 August, 2020 6:31 am By : पेननेपाल
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रयाटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडेनले सांसद कमला ह्यारिसलाई आफ्नो उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएका छन् ।
यस पदमा चुनाव लडने उनी पहिली काली महिला हुनेछिन् । जबकी उनको जरा भारतमा पनि छ, उनी भारतीय जमैका मूलकी हुन् । यसअघि दुई पटक कुनै महिलालाई उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाइएको थियो । सन् २००८ मा रिपब्लिकन पार्टीले सारा पैलिनलाई र १९८४ मा डेमोक्र्याटिकले गिराडिन फेरारोलाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार थिए, दुवैले हारेका थिए ।
अमेरिकाको दुवै प्रमुख पार्टीले आजसम्म कुनै अश्वेत महिलालाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाएका छैनन् । र, आजसम्म कुनै पनि अमेरिकी महिलाले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न सकेका छैनन् । क्यालिफोर्नियाकी सांसद कमला ह्यारिसले कुनै समय राष्ट्रपति पदका लागि जो बाइडनलाई चुनौती दिएकी थिइन् । तर राष्ट्रपति पदको दौडबाट बाहिरिएपछि उनको नाम उपराष्ट्रपतिका लागि लिइदै थियो ।
कमला क्यालिफोर्नियाको अटार्नी जनरल भइसकेकी छन् र उनी पुलिस सुधारकी ठूलो समर्थक हुन् । जो बाइडन तीन नोभेम्वरमा हुन गइरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई टक्कर दिदैछन्, जो रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार हुन् । ट्रम्पको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिमा अहिलेकै उपराष्ट्रपति माइक पेन्स रहनेछन् ।
जो बाइडनले ट्वीट गर्दै यसको जानकारी दिएका हुन् । उनले लेखेका छन् ‘मलाई यो जानकारी गराउँदा गर्व महसुश भइरहेको छ, की कमला ह्यारिस मेरो उपराष्ट्रपति उम्मेदवार हुनेछिन् । उनी बहादुर योद्धा हुन् र अमेरिकाको उत्कृष्ट नोकरशाहहरू मध्येकी एक हुन् ।’ जो बाइडनले भनेका छन् ‘उनी कस्तो काम गर्छिन भन्ने मैले देखेको छु । उनी क्यालिफोर्नियाको अटार्नी जनरल हुँदा मेरो दिवंगत छोरोसंग काम गर्थिन् ।’
कमलाले पनि ट्वीट गर्दै जो बाइडनलाई धन्यवाद दिएकी छन् । उनले भनेकी छन् ‘जो बाइडनले अमेरिकी जनतालाई एकताको सुत्रमा वाध्न सक्छन्, किनभने उनले हाम्रा लागि लडन पुरै जिन्दगी गलाएका छन् । उनी राष्ट्रपतिकोरूपमा यस्तो अमेरिका बनाउनेछन् जो हाम्रो आदर्शमा खरो उत्रनेछ ।’ उनले लेखेकी छन् ‘म आफ्नो पार्टीकोतर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारको हैसियतले उनको साथ सहभागी हुन पाउँदा गर्व महसुश गर्छु र उनलाई कमाण्डर इन चिफ (राष्ट्रपति) बनाउन जे गर्नु पर्छ ती सबै कुरा गर्छु ।’
५५ वर्षीया कमला ह्यारिस गत डिसेम्वरमा राष्ट्रपति उम्मेदवारको दौडबाट बाहिरिएकी थिइन् । उनको जन्म क्यालिफोर्नियाको ओकल्याण्डमा भएको थियो । उनका बाबु–आमा प्रवासी थिए । उनको आमाको जन्म भारतमा र बुवाको जन्म जमाइकामा भएको थियो । उनले हावर्ड युनिभर्सिटीमा अध्ययन् गरेकी हुन् जो एउटा कालाहरूको कलेज र युनिभर्सिटीकारूपमा चिनिन्छ ।
कमला भन्छिन् – म सधैं आफ्नो पहिचानप्रति सन्तुष्ट छु र आफूलाई मात्र एक अमेरिकी भनेर चिनाउन चाहन्छु । हावर्डपछि कमलाले क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीबाट कानुनमा डिग्री गरिन् र वकालत सुरु गरिन् । यसपछि उनी अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राज्य क्यालिफोर्नियाको अटार्नी जनरल बनिन् । यो पदमा पुग्ने उनी पहिलो अफ्रिकी–अमेरिकी महिला हुन् । कमला दुई पटक अटार्नी जनरल भइन् र त्यसपछि २०१७ मा सांसद बनिन् । यस्तो गर्ने उनी दोश्रो काली महिला हुन् ।